Gulf of Aden ayingxenye ye-Arabian ulwandle i-Indian Ocean. Ubude bayo 890 amakhilomitha. Ogwini olusenyakatho-Gulf iyona nhlonhlo Arabian, lapho itholakala isimo Yemen. olusentshonalanga naseningizimu ye-Afrika ne-United ka Djibouti neSomalia. Kusukela e-Indian Ocean empumalanga ethekwini ahlukaniswa esiqhingini Socotra (Yemen). Gulf of Aden uxhuma uLwandle Olubomvu, Strait of Bab el Mandeb.
Leli chweba kubaluleke kakhulu kwezomnotho, iyona ezokuthutha lamafutha nge amanzi kusukela Gulf eYurophu. Lokhu ATRIUM of Suez Canal, umfula komnotho womhlaba - kukhona mayelana 250 baleli imikhumbi kudlule nsuku zonke.
Gulf of Aden namuhla idonse amehlo njengoba umphakathi wezwe lonke, izigebengu nezakhamuzi nje. Futhi izizathu ukuthi amaningi. Ngakolunye uhlangothi, kuba ukudunwa luchuma, ngakolunye - anomaly yemvelo ukuthi kubangelwa kuyanda ukukhathazeka.
Ekuqaleni ngekhulu xxi kusenabantu ukudunwa okwandile. ukudunwa waseSomalia manje nje izimbali zawo ziwukudla. Pirates behlome ngemibese izibhamu, nakuba kwakungekho amacala kalowo kubulala. Banakekela ngaphandle kunoma iyiphi isevisi intelligence ukuyokudla izitsha kuhlanganise supertankers namakhemikhali emathangini avuzayo.
amazwe Islamic bakhathazekile khona elikhulayo Western amabutho empi kuyo esifundeni. umnotho wabo kuxhomeke ekutheni ukuhweba ngeke aye enkantolo yokuwuthola-Cape Agulhas.
Ayini amathemba sokuthuthukisa isimo Gulf? I Islamization ka ukudunwa, ukukhula kancane kancane ekuhlelweni kwawo, ukwanda wezimpahla tonnage ethumba zithutha ngokusebenzisa eGulf of Aden.
I anomaly lokhu ekhoneni Umhlaba itholakala lokuthi ukuthi kukhona izinguquko yemvelo ezenzeka ngenkathi akekho okwaziyo ukuchaza kusukela iphuzu zesayensi of umbono. Lapha basuke bagxila amabutho emazweni angu-27, inhloso esemthethweni okuyinto - elwa pirates. Ngokwe-portal ye-WikiLeaks, gcina kula mazwe akuzona pirates, futhi vortex magnetic Gulf, okuyinto kufakazela ukuthi ukugqashuka inhlekelele yemvelo embulungeni yonke.
Ngokokuqala ngqá anomaly ngesimo obishini giant Gulf sasitholakala kuyi 2000 emva uchungechunge komhlaba. Wakhe buboshelwe ukuqala ukuqala platform Afrika, okwaholela ukudabuka oLwandle Olubomvu futhi ekuqaleni kumiswa ocean entsha endaweni ye Afar Triangle e-Afrika.
imihlola Isifundo ukwenza Russia, China ne-United States, lapho wathumela ihhovisi omele eGulf of Aden. Nakuba bezama ukuthola okushiwo izenzakalo akazange nemiphumela ziphikisana ngokuthi imithetho yesayensi kanye logic. Inqubo kuhambisana gamma emisebeni umthamo Amazing nentuthu oyikhiphayo ongaphilile. Izinguquko kuholele yokuthi wonke amaplanethi yesimiso sonozungezilanga nayo isiqala ukubonakala ushintsho isimo sawo futhi uzibuthe. It kubonisani inhlekelele engokwemvelo emhlabeni wonke esikhathini esizayo. Ukuze ulandelele US mkhuba wadala ekomkhulu ngokuhlanganyela Djibouti.
Kuze 2008, Aden vortex kazibuthe kwakuyinto emile, kodwa muva nje waqala ukwandisa, okuyinto Kubangela ukukhathazeka okukhulu. Yilokho utshelwa US ukwazisa izwe ngezingozi soobschetvo, ekuphenduleni kwalokho esifundeni wathutha amabutho empi amazwe amaningi, ahlanganisa i-Australia, eCanada, China, Japan, Russia, UK kanye nabanye, iqondiswe ayekuthunyiwe eGulf of Aden. "Stargate" ivikelwe amakhulu esetshenziswa emikhunjini yezempi.
Technogenesis meteorite noma ubuthakathi? Yini imbangela yokungaphumeleli yeNhlonhlo Yamal?
Ukukhiqizwa kabusha vegetative zezitshalo ngokwemvelo futhi isivuno
"Pasvik" State Nature Reserve. Izilwane ezifuywayo inqolobane "Pasvik"
Ingubo yomshado ebiza kakhulu. Imfashini igodla izinga eliphezulu
Umklami yena indlela thunga amakhethini
Leptin (hormone) ukunyusele - kusho ukuthini? Leptin - a ukugcwaliswa i-hormone: umsebenzi kanye nendzima yayo
Ngokukhululekile Into esemqoka: kungani nokuthi ukuya sezindela
Ama-aphorisms kaBazarov njengombono we-hero
Garden Amathuluzi ziba ngcono inhlabathi: izithombe, izibuyekezo. Inventory ngoba ziba ngcono inhlabathi ngezandla zabo
Leland Orser: Biography futhi i-career kwizimboni movie nomdlali wamabhayisikobho waseMelika